Ciidamada Kenya oo dhibaatooyin u geysta shacabka Gobolka Waqooyi Bari – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi ( Mare.com)-Cabdicasiis Cali Faarax oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Kenya ayaa waxa uu sheegay in Ciidamada dalka Kenya dhibaatooyin fara badan ay ka geystaan Magaalooyin ka tirsan Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Mudane Cabdicasiis Cali Faarax ayaa tibaaxay in baaritaanno ay socdaan , haddii ay ku cadaato Ciidamada Kenya in Xasuuq ay ka geysteen Magaalooyinkaas in sharciga la horgeyn doono Ciidamadaasi.
Hadalka Xildhibaankaan ka tirsan Baarlamaanka Kenya ayaa yimid ka gadaal markii Ciidamada Kenya maalintii shalay ay rasaaseeyeen gaari dad shacab ah ay la socdeen kaas oo marayay Magaalada Mandera ee Gobolka Waqooyi Bari.
Tan iyo markii Ciidamada Kenya ay soo galeen Soomaaliya ayaa Al Shabaab waxa ay weeraro kala duwan ka geysteen dalkaas Kenya taas oo iyana sababtay in Ciidamada Kenya ay gabood fallo joogta ah kula kacaan dadka Soomaalida ah ee degan dalkaas haba ugu badnaadaan kuwa Gobolka Waqooyi Bari.